Lugood Radio VS Pandora, taas oo uu leeyahay fursad kale oo ay
> Resource > Lugood > Sida Loo Doorto ka Lugood Radio iyo Pandora
Iyada oo ay ilmadu dhawaan ka soo Lugood Radio wada jir ah ula macruufka 7 on September 18-keedii, waxay noqotay mid tartan dhab ah ugu baahay radio internet adeeg-Pandora, markii la sheegay in 11 milyan oo qof ay dhegaysan Lugood Radio intii lagu jiray todobaadkii hore la bilaabay. Waxaa sidoo kale lagu xamanayaa in Lugood Radio dalal kale sida UK faafin doonaa baalashiisa iyo Kanada ee hore ee 2014, taas oo Pandora ayaa gacanta ku qaadin.
Marka laga sida guulaha labadan adeegyada yihiin iyo waxa ay leeyihiin hami, kuwii ku caashaqi jiray waxa music dambeyntii dan waa heeso ay tahay galay maqalka. Adeegyada la midka ah waxay jeelyihiin in sida Lugood Radio iyo Pandora waa, waxay ilaa xad. Sidaas oo ka mid ah waxay leedahay fursad kale ka? Waayo, kuwa aan wax ogayn sida loo doorto laba ka, na raac si aad u aragto la barbardhigo hoose.
Ma leedahay dhibaato doorashada adeeg ku haboon naftaada hadda? Lugood Radio kharash yar oo uu leeyahay maktabad music weyn. Waxaa sidoo kale la dhexgeliyey Siri waayo-aragnimo fiican. Iyadoo Pandora taageertaa qalabka more kale oo aan ahayn qalabka Apple oo dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad soo ku salaysan ay technology sare u ogaado. Sidaas ayaa u sheegay oo dhan ilaa aad si ay u doortaan mid halka labada iyaga ka mid ah waxay leeyihiin mudnaanta weyn aad culays badan in.
Fiiro gaar ah: Ka dib markii aad dooratay hal adeeg ah oo inta badan Dhagaysta, waxaa laga yaabaa inaad ka soo dejisan ama u qoraan music ka Lugood Radio ama Pandora dooni cusub. Ha welwelin iyo aad u heli doonaa. The Wondershare Streaming Audio Recorder waa qalab weyn oo awood aad si ay u qoraan music ka cayn kasta oo muusiko ah oo ay ku jiraan goobaha Lugood Radio iyo Pandora. Waa Qori dhawaaqa si toos ah uga your computer sidaa darteed waxa aad ku maqli waa waxa aad u hesho. Waxaa Download ka hoose oo u siin go a.